mnmcadmin | Myanmar Nurse and Midwife Council
by mnmcadmin | Jan 27, 2021 | News
မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားကောင်စီမှမတည်၍ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်များကပေးပို့လာသောလှူဒါန်းငွေများကို COVID-19 (Positive ) ဖြစ်သည့်သူနာပြုသားဖွား၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား မေတ္တာပြအားပေး ကူညီထောက်ပံ့‌ မှု‌ေပးလျက် ရှိပါသည်။ ၇.၉.၂၀၂၀ မှ ၁၅.၁.၂၀၂၁ အထိ ရန်ကုန်တိုင်း...
by mnmcadmin | Dec 1, 2020 | News
The ASEAN (AJCCN) virtual meeting was held on 26th November, 2020. The president, Vice-president and members of Myanmar Nursing and Midwifery Council participated the virtual meeting from office of the Myanmar Nurse and Midwife Council. In the morning session the...
by mnmcadmin | Nov 7, 2020 | Announcements, News
မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွာကောင်စီတွင်လိုင်စင်နှင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ ပုံစံ (FORM) များ သူနာပြုသားဖွားများအားလုံး save လုပ်ထားနိုင်ကြရန် အောက်တွင်...
by mnmcadmin | Nov 2, 2020 | Announcements, News
သွားလာရန်အခက်အခဲရှိ​နေ၍သူနာပြုသားဖွားလိုင်စင်များသက်တမ်းတိုးလိုပါက​ပူးတွဲ​ဖော်ပြပါလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း​ဆောင်ရွက်၍ အမှတ်(၃၂ ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်လမ်း ဗဟန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်း​ဒေသကြီးသို့ စာတိုက်မှဖြစ်​စေ၊ အမြန်​ချောပို့များနှင့်ဖြစ်​စေ​ပေးပို့​လုပ်​ဆောင်နိုင်ပါသည်။...
by mnmcadmin | Oct 26, 2020 | News
မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွား​ကောင် စီသည် COVID 19 ကာကွယ်၊ထိန်း ချုပ်၊ကုသ၊ပြုစု​ရေးတာဝန်များကိုနယ်ပယ်အသီးသီးတွင်​ ​ရှေ့တန်းမှတာဝန်​ကျေပွန်စွာထမ်း​ဆောင်ရင်း​ရောဂါကူးစက် မှု့ခံရ​သောသူနာပြုသားဖွားသားသမီးများ၊ကျန်းမာ​ရေးဆရာ မများအား...